DIY yekushongedza mazano emakamuri ekurara | Crafts On
DIY yekushongedza mazano emakamuri ekurara
Mhizha On | 25/09/2021 10:22 | Humba Dzemhizha
Zvekushongedza kwemakamuri ekurara iwe unogona kusarudza pakati pekutenga zvinhu zvakasiyana zvaunoda kuisa, senge armchair kana mwenje wetafura, uye zvakare yekugadzira zvako zvidimbu. Muchikamu chino tinoona zvimwe DIY yekushongedza mazano emakamuri ekurara izvo zvaunogona kuita nemaoko ako pachako kuti ubate wega kukamuri iripedyo.
1 Makushiro anofukidza
3 Musoro webhodi
7 Rusvingo rwemwenje
8 Yakadzoreredzwa ebetsero fenicha
ari akavhara pamutsago Zvinogona kuve zvakapusa kuita kana kuwedzera kujekesa, zvinoenderana nezvaunoda. Uye pamusoro pezvose, inogadziriswa zvakanyanya. Zvakare, haufanire kutenga macushion matsva, ingo bvisa zvakafukidza zvekare kana kuvhara macushion pachawo.
Iwo makushingi anoshanda chaizvo uye, mukuwedzera, iyo mubhedha ichave yakanaka kwazvo. Unogona kuva nezvakawanda sezvaunoda. Iwe unogona zvakare kushandura mabutiro kuti akodzere mwaka wegore kana zviitiko zvaunoda kuratidzira mukushongedza, senge Kisimusi, Halloween, Zuva reValentine, nezvimwe.
Kana iwe ukashandisa machira iwe unogona zvakare uzviite iwe pachako. Izvo zviri nyore kuchinja uye zvinogona zvakare kusanganiswa nezvimwe zvemachira zvekushongedza zvinhu, zvinosanganisira macushion makavha. Kunyangwe kuzvichinja kuchitora rimwe basa, iwe unogona zvakare kuzviita zvinoenderana nenguva yegore kana paunenge uchida kupa yekurara mweya wakasiyana.
Iyo yemusoro yemubhedha iri zvakare yekurara yekushongedza chinhu iwe unogona kuzviita iwe pachako. Unogona kuzviita nemachira kuti uenzanise nezvimwe zvakasara, shandisa zvinhu zvakadzokororwa, sarudza zvinhu zvemuti, nezvimwe.
Zvimwe DIY yekushongedza chinhu chaunogona kuzviitira iwe mwenje, zvese siringi uye imwe tafura inobatsira. Unogona kuzvisanganisa nyore nyore nezvimwe zvese zvinhu zvawakagadzira kana nezvimwe zvawakatenga, kana kungoshandisa zvinhu zvinopesana. Unogona kushandisa tambo dzepanyama kana zvinhu zvakadzokororwa, pamwe nemachira uye zvimwe zvakanakisa zvinhu, kana uchida.
Isu tinoti hunyanzvi hwemadziro nekuti izwi iri rinokwana chero chinhu chaunogona kuturika, kubva pamifananidzo kusvika kumifananidzo kumachira emachira, zvigadzirwa zvesimbi, magadzirirwo ejometri, maruva, vabati vezviroto, kana chero chimwe chinhu chaunogona kufunga nezvazvo, senge zvinhu zvakajekeswa. kubva kuzvinhu zvakadzokororwa. Iwe unogona kutamba nezvimiro, izvo zvinhu uye zvakare nemwenje.
Homwe zvinhu zvekushongedza izvo zvinonyanya kubatsira. Muimba yekurara, zvinoenderana nekureba uye chimiro, vanogona kushanda seshangu, se anobatsira element kugara pasi kana kusiya mbatya kuti uchapfeka. Uye iwe unogona kuzviita iwe pachako. Iwe unongofanirwa kusarudza maitiro uye kutanga kushanda.
Panzvimbo pekushandisa marambi ebetsero kana semubatsiri kune aya iwe unogona isa zvidimbu zvemarambi madiki emadziro pamadziro kunyatsorembera, zvakanaka pakati pemidziyo uye zvekushongedza zvemukati mekurara. Iwe unogona kuwana zvakanakisa mhedzisiro uye gadzira inonakidza mamiriro.
Yakadzoreredzwa ebetsero fenicha
Unogona dzorera fenicha yekare uye uvape chitarisiko chaunoda zvakanyanya. Iwe unogona kuvapa iwo wazvino kana wakasarudzika mweya, kana kuadzosera iwo muvintage maitiro. Iwe une zvakawanda zvaunogona kuita, kubva pamashalofu kusvika pamatafura emubhedha, uchienda kuburikidza nemirazi, masherufu emadziro kana zvinhu zvakarembera, matafura epadivi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mhizha On » Crafts » Humba Dzemhizha » DIY yekushongedza mazano emakamuri ekurara
Yainzwa pikicha yevana
Rakareruka gamba nemiti yezvigadzirwa uye kadhibhodhi